ယောက်ျား၊ မိန်းမ စာနာထောက်ထား မှု[ပြင်ဆင်ရန်]
ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းများသည် ယောက်ျား၊ မိန်းမ တန်းတူညီမျှမှုအား အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီး များ၏ အခွင့်အရေးများ နှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နှင့် သက်ဆိုင်သော လူ့အခွင့်အရေး များ ဟု အနက်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့် ဆိုကြသည်။ UNICEF (ယူနီဆက်(ဖ်)) သည် ယောက်ျား၊ မိန်းမ တန်းတူညီမျှမှုအား "ကလေးသူငယ်များအားလုံးတွင် ၎င်းတို့၏ အရည်အသွေးများကို ဖွံ့ဖြိုးစေရန် တူညီသော အခွင့်အရေးများ ရှိကြောင်းကို သေချာစေခြင်းအားဖြင့် မိန်းက လေးများ နှင့် အမျိုးသမီးကြီးများအတွက် ကစားကွင်းတစ်ခုကိုညှိပေးခြင်း "ဟု အနက်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့် ဆိုသည်။ ကုလသမဂ္ဂ လူဦးရေ ရန်ပုံငွေ သည် ယောက်ျား၊ မိန်းမ တန်းတူညီမျှမှုအား "ပထမဦးစွာသော လူ့ အခွင့်အရေးတစ်ရပ်" ဟု ကြေညာခဲ့သည်။
အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ဝန်ကြီးဋ္ဌာနများ[ပြင်ဆင်ရန်]
United Nations Rule of Law: Gender Equality Archived 21 July 2011 at the Wayback Machine.
The OneWorld Guide to Gender Equality Archived 13 May 2010 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ယောက်ျား၊_မိန်းမ_တန်းတူညီမျှမှု&oldid=729691" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၂ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၀၇:၄၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။